नेपालको सीमा नमिचिएको | BIVAS
← किन दिए भोजराजले राजीनामा ?	माटो बचाउ अभियानका युवा भारतीयको फन्दामा →	नेपालको सीमा नमिचिएको	05
परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले दाङमा भारतीय पक्षले नेपाली सीमा नमिचिएको बताएकी छिन् । भारतीय राजदूत राकेश सूदसँग शुक्रबार आफ्नै निवास महाराजगन्जमा भेटेपछि कोइरालाले सन्चारकर्मीमाझ स्थलगत अवलोकनमा गएका सरकारी अधिकारीहरुबाट सीमा मिचेको तथ्यलाई खन्डन भएको बताइन् ।
परराष्टमन्त्रीको कार्यभार ग्रहण गरेकै दिन कोइराला मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक छोडेर राजदूत सुदलाइ भेट्न निवास मण्डीखाटारमा पुगेकी थिइन् ।
भेटपछि भारतीय राजदूत राकेस सुदले दाङ, बारालगायतका जिल्लामा भारतीय पक्षबाट नेपाली नागरिकलाई विस्थापित नगरिएको दाबी गरे । सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा राजदूत सूदले भारत र नेपालको राम्रो नहोस् भन्ने तत्वले विस्थापितको हल्ला फैलाएको आरोप लगाए ।
“नेपाली जनता भारतीय पक्षबाट विस्थापित भएका छैनन,” राजदूत सूदले भने, “केही राजनीतिक दल र व्यक्ति नेपाल भारत सम्वन्ध बिगार्न दुष्प्रचारमा लागेका छन् ।”
उनले कसले हल्ला फिजाएको भन्ने जिज्ञासाको भने जवाफ दिन अस्वीकार गरे । Like this:Like Loading...
← किन दिए भोजराजले राजीनामा ?	माटो बचाउ अभियानका युवा भारतीयको फन्दामा →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...